सदस्यता स्वतः नवीकरण हुँदा मेरा प्रयोग नगरिएका भ्वाइस मिनेट र SMS हरूको के हुन्छ?
तपाईंका प्रयोग नगरिएको ब्यालेन्स नयाँ मान्य अवधि सहित तपाईंको नयाँ बन्डलमा रोल ओभर गरिनेछ, यद्दपि बन्डलको निम्नानुसारको अधिकतम सीमा हुन्छ:
UMI 20 - 40 मिने UMI 30 - 60 मिनेट UMI 38 - 300 मिनेट र 60 SMS UMI 50 - 100 मिनेट
अतिरिक्त मिनेटहरू र SMS लाई जफत गरिनेछ।
मेरो स्वतः नवीकरण असफल भयो तर दोस्रो प्रयासमा नवीकरण भयो भने मेरो प्रयोग नगरिएको ब्यालेन्सको के हुनेछ?
पहिलो नवीकरणको प्रयास असफल भयो भने दोस्रो प्रयासमा नवीकरण सफल भएतानि प्रयोग नगरिएको ब्यालेन्स (डाटा, भ्वाइस र SMS) लाई हटाइनेछ र रोल ओभर गरिनेछैन।
दोस्रो प्रयासमा नवीकरण (सेवाहरू नवीकरण गर्न) असफल भयो भने के हुन्छ?
तपाईंको सदस्यता सेवालाई स्वत: हटाइनेछ र प्रयोग नगरिएको कुनै पनि ब्यालेन्सलाई जफत गरिनेछ।
मैले यो योजना कति पटकसम्म सक्रिय बनाउन सक्छु भन्ने कुनै सीमा छ?
छैन, तपाईंले सक्रिय बनाउने पटकको कुनै सीमा छैन।
मसँग मेरो प्रिपेड खातामा केही फ्रिबाइज (डाटा, भ्वाइस र SMS) छन्। कुनै बकेट पहिले प्रयोग गर्नुपर्छ?
डाटा: फ्रिबाइज जस्तै App-Onz (Facebook, Twitter र Instagram), सक्रियकरण गर्दाको Free 200MB र हरेक महिनाको Free 1GB (पावर प्रिपेड) UMI अघि नि:शुल्क आधारभूत इन्टरनेटपछि प्रयोग गरिनेछ।
भ्वाइस: नेट कलहरूमा नि:शुल्क 10 मिनेट (असीमित पावर योजनामा) जस्ता अन्य फ्रिबाइजपछि UMI को प्राथमिकता हुनेछ।
सबै UMI योजनाहरूमा 4G LTE हाइ स्पिड इन्टरनेट उपलब्ध छ?
3G इन्टरनेटमा जडान हुने UMI 18 र UMI28 बाहेक सबै UMI (UMI 20, UMI 25, UMI 30, UMI 48, UMI38, UMI 50) 4G LTE का लागि योग्य हुन्छन्।